Nahoana No Tsirim-Panantenana Hoan’i Somalia Ravan’ny Ady Ny Dia Lavitr’Ezaka Nataon’ny Elefanta Iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Marsa 2016 11:16 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Español, नेपाली, 日本語, Italiano, English
Elefantan'akata Afrikana. Sary navoaka ambany Lisansa Tahirinkevitra Malalaka GNU avy amin'ny mpisera Wikipedia Muhammad Mahdi Karim.
Nahatohina ireo mpiaro [biby] ny elefanta lahy manirery antsoina hoe Morgan rehefa nandeha 220 kilometatra avy any Kenya nankany Somalia. Tena tsindraindray, amin'ny ankapobeny, no ahitana biby ao Somalia tao anatin'ny 20 taona farany noho ny ady an-trano tao amin'ny firenena.
Morgan, izay ao anatin'ny faha-30 taonany, dia nanao fehitenda fitsongoan-dia, nahafahan'ny mpiaro biby nanaraka ny diany naharitra telo herinandro nianavaratra. Ny tatitra sasany niantso izany ho fahitana elefanta voalohany voamarina tao Somalia hatramin'ny nahavaky ny ady an-trano tamin'ny 1980s, na dia notsongain'ny Al Jazeera aza ny fanambaran'ny manampahefana Somaliana any ifotony tamin'ny Septambra 2015 nilaza fa efa nisy elefanta mbamin'ny liona, leoparda, zirafa, ombidia ary aostrisy niampita sisintany tonga hatrany.
“Tamin'ny fitsongoan-dia rehetra nataonay nanerana an'i Afrika – sy ireo toe-draharaha ireo – dia mampiavaka tanteraka tsy fahita izao fifindran-toerana izao,” hoy i Iain Douglas-Hamilton avy ao aminny fikambanana iraisampirenena ho Fanavotana ny Elefanta. “Ny fivezivezen'ny biby goavana tokana manavatsava ny distrika midadasik'i Lamu iray manontolo, hatrany amin'ny reniranon'i Tana ka hatrany amin'ny sisintany Somaliana, tsy mbola nisy nahita tahaka izany taloha hatrizay.”
Nandao ny Vinanin'ny Renirano Tana any Kenya i Morgan tamin'ny tapaky ny volana febroary ary tonga tao Somalia tamin'ny fiandohan'ity volana ity. Latsaky ny 24 ora ihany no nolanian'ilay elefanta tao Somalia dia nitodi-doha hody izy.
Nahoana no nandao an'i Somalia ny elefanta 20 taona lasa izay?
Ny ady an-trano Somaliana, ady an-trano mbola mitohy hatramin'izao ary nanomboka tamin'ny 1980s, dia tsy namindray ny olona an'arivony fotsiny ihany, fa ireo biby mpirenireny ao amin'ny firenena ihany koa. Raha nandositra hamonjy ny tobin'ny mpialokaloka any Kenya, Ethiopia ary toeran-kafa ny olona, dia maro ny biby mpirenireny, indrindra ireo biby dimy goavana (ny liona afrikana, ny elefanta afrikana, ny ombidian'i ‘le Cap’, ny leoparda afrikana, ary ny tokatandroka mainty/fotsy), nifindra monina tany amin'ny valan-javaboary malalak'i Kenya.
Ankoatra ny fifandirana, dia mampijaly ny elefanta tany Somalia ihany koa ny fihazana tsy ara-dalàna, izay nataon'ny milisy mitam-piadiana ho loharanom-pidiram-bola.
Toerana masina ho an'ireo biby dimy goavana ireo ny faritra atsimon'i Somalia nialoha ny nirodanan'ny governemanta foibe tao Somalia tamin'ny 1991. Azo nambolena ny faritra, raha oharina amin'ny faritra hafa tao Somalia izay makiana ampahany sy makiana tanteraka, ary mandalo ao amin'ny faritra ny renirano lehibe indrindra ao Somalia, Jubba sy Shabelle.
Saingy io faritra io ihany koa no tsy voafehin-dalàna indrindra, eo ambany fifehezan'ny vondrona mitam-piadiana Al Shabaab mialoha ny nanosehan'ny tafiky ny governemanta foibe tohanan'i Kenya azy ireo. Ny fiverenana an-tselik'i Morgan angamba no fanondroana fiverenan'ny fitoniana ao amin'ny faritra.
Araka ny nantenaina moa dia noraisin'ny olona maro tamim-pifaliana sy fientanentanana izany vaovao izany. Ao amin'ny Twitter, nanamarika ny Wildlife Conservation Society :
Ny dia feno herimpon'ilay elefanta, hatrany Lamu nankany Somalia, no mampiseho ny maha-zavvadehibe ny fiarovana ny toera-ponenana sy ny lalantsara [tanety]
‘Ny zavatra TSARA INDRINDRA azonao atao ho an'i Morgan dia ny MANGINA azafady’
Tamin'ny famaliana ny tantaran'i Morgan nivoaka tao amin'ny pejy Facebook Save the Elephants, ny sasany tamin'ny mpamaky no nanontany tena hoe nahoana no tsy notazonina ho tsiambaratelo ny tantara ho foarovana ny biby. Mety hampiasa ny filazana ny mpihaza hitady an'i Morgan, hoy ny fandresen-dahatr'izy ireo, na dia tsy nolazaina aza ny toerana misy an'i Morgan ankoatra ny filazana fa niditra telo kilometatra tany anatin'ny sisintanin'i Somalia ilay elefanta mialoha ny nitodihany niverina.
Nanoratra i Adrienne Hesford :
Ny zavatra tsara indrindra ho an'i Morga, dia ny tokony tsy nitenenana na inona na inona amin'ny fisiany sy ny mombamomba azy. Manahy ny fiarovana azy sy ny elefanta hafa ao amin'io faritra io aho ankehitriny.
Nanoro hevitra i Julie Goodison :
Ny zavatra TSARA INDRINDRA azonao atao ho an'i Morgan dia ny MANGINA amin'ny firesahana momba azy azafady indrindra!!!! sy ny mandoko ny vanginy mazava loatra
Christie Haskins nanontany ny fanjohin-kevitry ny famoahana ny dia lavitr'ezaka nataon'i Morgan nankany Somalia:
Ratsy izao fandokafana sy izao lahatsoratra izao satria mampidi-doza amin'ny tsy antony ilay elefanta mamirapiratra. Manahy ny aminy indrindra aho.
Heverina ho karazam-biby marefo ny elefanta afrikana, araka ny lisitra menan'ny karazam-biby navoakan'ny IUCN, ary ny fihazana sy ny fahapotehan'ny toera-ponenany no zavatra mampatahotra indrindra mety hihatra amin'izy ireo.
Nanamarika i Barbara Thomson nieritreritra ilay tantara :
Nitranga ny fahagagana, ankehitriny isika tsy maintsy manara-maso io elefanta io ary tokony hampirisihana ny Somaliana ho amin'ny fitehirizana fa tsy ho amin'ny famonoana.
Julius Mbuyi nanolo-kevitra fa i Kenya no toerana tsara indrindra ho an'i Morgan:
Mila averina any Kenya amin'ny fotoana araka izay haingana indrindra io elefanta io!
Nilmini Lekamge nanolokevitra ny hanomezana mpiambina ny elefanta
Afa-mametraka mpiambina iray ho azy ve ry zareo? Efa voapetaka fanaraha-masy ihany izy. Raha misy na dia iray fotsiny aza, tsy tokony ho sarotra izany. Manantena aho!!
Young Ak, Somaliana iray mpisera Facebook, nanararaotra hangaraka amin'i Kenya ny hampodiana ny elefanta somaliana any amin'ny fireneny:
Modia, mamy ny mody fa tapitra ny ady an-trano! tokony hamerina ny elefanta somaliana sisa hody i Kenya na hanome ny 10%-n'ny vola azo amin'ny fizahantany mandritra ny 200 taona amin'i Somalia.